Aung's Investment: Combining Crowd Thinking with Crowd Commitment
Combining Crowd Thinking with Crowd Commitment
ဒီအပတ်တော့ Technical Analysis methodတစ်ခုအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ အခုတလော Market Updateတွေပဲရေးတာ များနေတာလည်း ပါပါတယ်။ အဲဒီ့Indicatorကတော့ Money Flow Index (MFI) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Laszlo Birinyi, Jr. ဆိုတဲ့သူက တီထွင်ခဲ့တာပါ။ MFIကို တွက်ဖို့ Priceရော၊ Volumeရော သိရပါမယ်။ MFIကိုတွက်ဖို့က နည်းနည်းတော့ ပေရှည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Charting Softwareတွေ၊ Web Siteတွေ တော်တော်များများမှာ Standard အနေနဲ့ ပါပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုတွက်လည်းဆိုတာသိရင် ပိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်။
MFI Formula အဆင့်ဆင့်
၁. Average Price = (High + Low + Close) / 3
၂. Money Flow = Average Price x Volume
၃. ဘယ်နှစ်Periodအတွင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ Money Flowကိုတွက်မလည်းဆိုတာ သတ်မှတ်ပါ။ 14-periodဟာ အသုံးအများဆုံးပါ။
၄. Positive Money Flow = နံပါတ်၃မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ No. of Periodsအတွင်းမှာ Average Priceတစ်ခုစီဟာ Previous Average Priceထက် ပိုကြီးတယ်ဆိုရင် အဲဒီ့ Average Priceတွေကို ပေါင်းသွားပါမယ်။ (Cumulative Total, in other word)
၅. Negative Money Flow = နံပါတ်၃မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ No. of Periodsအတွင်းမှာ Average Priceတစ်ခုစီဟာ Previous Average Priceထက် ပိုငယ်တယ်ဆိုရင် အဲဒီ့ Average Priceတွေကို ပေါင်းသွားပါမယ်။ (Cumulative Total, in other word)
၆. Money Ratio = Positive Money Flow / Negative Money Flow
၇. Money Flow Index (MFI) = 100 - (100 / (1+ Money Ratio))
MFI Formula Step 7ဟာ MFIရဲ့ Valueတွေကို ၀-၁၀၀အတွင်းပဲ Range Boundဖြစ်နေအောင် Designလုပ်ထားတာပါ။ MFI value 20ကို Oversold (Bullish)လို့ သတ်မှတ်ပြီး MFI value 80ဖြစ်နေရင် Overbought(Bearish) ဖြစ်နေတယ်လို့ Trading Signalတွေ ယူနိုင်ပါတယ်။ MFI 20ဖြစ်နေရင် Stockတစ်ခုကနေ ငွေတော်တော်များများ ထွက်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်။ 80ဆိုရင်တော့ ငွေတော်တော်များများဝင်ပြီးနေပြီမို့ Traderတွေဟာ Profit-takingလုပ်ဖို့ တာစူနေလောက်ပြီလို့ ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ Oversold / Overboughtမှာ သတိထားရမှာက Stockရဲ့ Fundamental Dataတွေက အရမ်းဆိုးရွား/ကောင်းမွန်နေရင် ဆက်ပြီး Oversold / Overboughtဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ တခြား Technical Analysis Techniqueတွေနဲ့ တွဲပြီး Trading Decisionချတာဟာ ပိုစိတ်ချရပါတယ်။ Common senseဟာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ Fundamentally Strongဖြစ်တဲ့ Stockတစ်ခုဟာ ပြဿနာကြီးကြီးမားမားမရှိပဲ Oversold / Overboughtဖြစ်နေပြီဆိုရင် Reversalဖြစ်ဖို့ သေချာသလောက်ရှိပါတယ်။
အောက်မှာ Dow Jones Industrialရဲ့ Candle Chart, MFIနဲ့ MACD_H chartတွေကို ပြထားပါတယ်။ MFIဟာ ၁၄ရက်ပေါ်မှာ အခြေခံထားတာပါ။ MFIနဲ့ MACD chartတွေဟာ Up trendလိုဖြစ်နေတဲ့ Candle Chartရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် Trendကို ပြနေပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေတာကို Bearish Divergenceဖြစ်နေတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Bearish Divergence Trend Lineကိုဆွဲရင် MFIလိုင်းရဲ့ Peakတွေကို ထိပြီးဆွဲသွားပါမယ်။ Bullish Divergence Trendကို ရဖို့ကတော့ Trough (V-shape bottom)တွေကို ဆက်ပြီးဆွဲပါမယ်။
Stockတစ်ခုရဲ့ ဈေးဟာ Investorတွေက ဘယ်လောက်တန်တယ်လို့ သတ်မှတ်တဲ့ Thinking ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ Thinkingကို လူဘယ်နှစ်ယောက်က သဘောတူကြလည်းဆိုတာကတော့ Commitmentဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Priceကို what the crowd thinksလို့ ခေါ်ပြီး Volumeကိုတော့ what the crowd commitsလို့ ခေါ်ပါတယ်။ Priceရော Volumeရောသုံးထားတဲ့ MFI Indexဟာ အမြဲတမ်းတော့ မမှန်နိုင်ပေမယ့် ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများကို အသုံးဝင်အောင် မှန်ကန်ပါတယ်။ MACD_Hလို indicatorမျိုးကတော့ Price actionကိုပဲ Analysisလုပ်တာမို့လို့ MFIလို Indicatorလောက် Crowd Psychologyကို ကောက်ချက်ချရာမှာ စိတ်သိပ်မချရပါဘူး။ Traderတစ်ယောက်အနေနဲ့ အဓိကစောင့်ကြည့်ရမှာက Divergenceတွေကို ကြည့်ရမှာပါ။ Indicator တစ်ခုထက်ပိုပြီး Divergence Signalတွေပေးနေပြီဆိုရင် လုပ်သင့်တာကို မြန်မြန်သာလုပ်ပေတော့။ ဒီလောက်ဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က Sellလို့ပြောခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ Recommendationကို အထောက်အကူပေးခဲ့တဲ့အထဲမှာ MFIဟာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ပါခဲ့တယ်ဆိုတာ သိလောက်ပါပြီ။
Posted by Aung Myo Htet at 4/08/2010 08:51:00 PM
Labels: correction, methods, MFI, Money Flow, technical analysis